Somalia: Doon hub culus u wadey Somalia oo la qabtey - Wargane News
Home Somali News Somalia: Doon hub culus u wadey Somalia oo la qabtey
Markab dagaal oo laga lee yahay dalka Australia oo lagu magacaabo HMAS Darwin ayaa qabtey ku dhawaad 2000 oo qoiri oo AK47 ah iyo hub kale oo loo wadey Soomaaliya.
Doonta la qabtey oo nooceedu ahaa mid kaluumeysi ayaa ku jeedey xeebaha Soomaaliya. Ma cadda goobta saxda ah ee hubkan cinwaankiisu ahaa.
Dhanka kale Ciidamada Australia kama aysan hadlin xiliga ay qabteen doontan, laa minsan yahay in ay ka timid dhanka dalka Yemen ama dalalka kale ee Bariga Dhexe ee nidaam daradu ka taagan tahay.
Xeebaha Soomaaliya waxaa weli ilaalo ka haya maraakiibta shisheeye tan iyo sanadkii 2010, kadib markii ay oggolaansho ka heleen Qaramada Midoobey, kadib markii Burcad-badeed ka dilaaceen xeebaha Soomaaliya.